musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vols kubva kuBudapest kuenda kuDubai pane flydubai ikozvino
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Kushumira vese vafambi vebhizinesi nevashanyi zvakafanana, kusvika kwefldubai kuchasimudzira kugona kweBudapest Airport kune imwe nzvimbo yakakosha yepasi rese. Kodhi-kugovana neEmirates munzira ino inovhura zvinopfuura 190 nzvimbo dzendege dzinosanganisira Asia, Africa, Australia, uye US.
Budapest Airport inoratidzira kubhururuka kweflydubai kuDubai kubva kuguta guru reHungary.
Iwo mana-nguva vhiki nevhiki sevhisi kuguta reMiddle East rinoshanda gore rese.
Kuuya kwe flydubai kunowedzera zvakanyanya kuunganidzwa kwegedhi reHungary kuhubhu yeDubai.
Kupemberera kusvika kweshamwari yayo yazvino nyowani yendege, Budapest Airport yakaratidza kuburitswa kweflydubai kuDubai kubva kuguta guru reHungary. Iyo ina-nguva vhiki nevhiki sevhisi kuguta reMiddle East ichashanda gore rese uye nekuwedzera zvakanyanya hungariya regedhi reHungary kuhubhu yeDubai.
Pakutangisa, Balázs Bogáts, Musoro weKuvandudza Ndege, Budapest Airport akati: “Kushumira vese vafambi vebhizinesi nevashanyi zvakafanana, kusvika kwe flydubai pane yedu inotakura rollcall inowedzera kugona kwedu kunzvimbo yakakosha yepasi rose hub. Kugovana kodhi neEmirates munzira iyi kunovhura zvinopfuura nzvimbo mazana mapfumbamwe kune vatinofamba navo kusanganisira Asia, Africa, Australia neUS. ”
Ghaith Al Ghaith, CEO, flydubai, akati: "Taona kudiwa kwekufamba kwezhizha chirimo ichi uye nekutanga kwendege kuenda kuBudapest, tiri kuwedzera network yedu pamusoro penguva yechando kupa vatakuri vedu imwe sarudzo yekufamba. Kuvhiya kwedu kuchangotanga kuHungary kuchasimbisa hukama neUAE. ”
Flydubai, zviri pamutemo Dubai Aviation Corporation, inzvimbo yehurumende-ine bhajeti yendege muDubai, United Arab Emirates ine hofisi yayo hofisi nekushanda kwendege muTerminal 2 yeDubai International Airport. Iyo yendege inoshanda anokwana 95 ekuenda, anoshandira Middle East, Africa, Asia neEurope kubva kuDubai.
Budapest Ferenc Liszt International Airport, yaimbozivikanwa seBudapest Ferihegy International Airport uye ichiri kungodaidzwa kuti Ferihegy, ndiyo nhandare yendege yepasi rose iri kushandira guta guru reHungary guta reBudapest, uye nanhasi ndiyo nhandare huru dzendege ina dzenyika.
Dubai International Airport (IATA: DXB, ICAO: OMDB) ndiyo yekutanga nhandare yendege inoshumira Dubai, United Arab Emirates, uye ndiyo nhandare yepasi rose yakabatikana nevekunze vatyairi. Ndeyewo nendege yegumi nepfumbamwe-yakanyanya kubatikana pasirese neyavanofamba nevanhu, imwe yendege dzinotakura zvinhu munyika, nhandare yakanyanya kubatikana yeAirbus A380 neBoeing 777 mafambiro, uye nhandare ine huwandu hwepamusoro hwevapfuuri pakufamba